DOWLADAHA JABUUTI IYO ITOOBIYA OO MAMNUUCAY BAASABOORKA SOMALILAND, + sabaabta,,,,,, |
DOWLADAHA JABUUTI IYO ITOOBIYA OO MAMNUUCAY BAASABOORKA SOMALILAND, + sabaabta,,,,,,
Dowladaha Jabuuti iyo Ethiopia oo ahaa labada dawladood ee kali ah ee lagu geli jirey Bassaborka Somaliland ayaa si rasmi u mamnuucay in dalalkooda lagu soo galo,waxayna dowladahaasi talaabada ay qaadeen ay sabab uga dhigeen waxa ay ugu yeereen ammaan darro.
Xaafiiska dalka Ethiopia ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa fiisooyinkii dal ku galka dalka Ethiopia ee ay ku dhufan jirtay baasaboorka Somaliland gebi ahaanba joojisay, waxaana dadkii hore u dalbaday fiisooyinka dib loogu soo celiyey baasabooradoodii, halka masuulkii u qaabilsan xafiiska dalka Ethiopia ku leeyahay Somaliland dhinaca fiisooyinkana dib loogu yeeray magaalada Addis Ababa.
Dalka Ethiopia ayaa gebi ahaanba xiray xuduudka wajaale ee u dhexeeya Somalilya iyo Ethiopia, iyadoo ciidamadda dalka Ethiopia ee xuduudka labada dhinac u dhexeeya jooga ay dib u celinayeen dadka watay baasabooradda maamulka Somaliland ee wata fiisadda dalka Ethiopia, isla markaana keliya loo ogolaanaayey inay gudaha Ethiopia galaan dadka wata mustawaqaha ama waraaqaha dhalashada ee dalka Ethiopia.
Dhinaca kale Masuuliyiin ka tirsan dowladda Jabuuti ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in la joojiyey Baasaboorkii Somaliland, iyadoo ay socoto Baaritaanno lagu wado weli dad lagu Tuhunsan yahay Qaraxyadii ka dhacay dalka jabuuti oo lagu Hawllan yahay.
Go’aamadan ay qaateen Dalalka Ethiopia iyo Jabuuti ayaa loo aanaynayaa salka ku haya qaraxii dhawaan ka dhacay Magaalada Jabuuti oo dadkii soo abaabulay la sheegay inay Somaliland ka tageen, waxana ay taasi shaki gelisay Dawladahaasi oo ku andacooday inay u baqayaan ammaanka dalalkooda.